ပြင်သစ်လက်ရွေးစင်ကစားသမား ဘ၀ကနေအနားယူခဲ့တဲ့ ကိုစီယဲလ်နီ Koscielny
15 Oct 2018 . 5:20 PM
အာဆင်နယ်အသင်းရဲ့ ပြင်သစ်လက်ရွေးစင် ကစားသမား ကိုစီယဲလ်နီ Koscielny ဟာ နိုင်ငံလက်ရွေးစင်ကစားသမားဘ၀ကနေ အနားယူခဲ့ပါပြီ။ ကိုစီယဲလ်နီဟာ ပြင်သစ်အသင်းရဲ့ ကမ္ဘာ့ဖလားအောင်ပွဲမှာ မပါဝင်ခဲ့လို့ စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်လို့ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ အာဆင်နယ်နဲ့ အက်သလက်တီကိုတို့ ကစားခဲ့တဲ့ ယူရိုပါလိဂ်ပွဲစဉ်ပွဲစဉ်မှာ ကိုစီယဲလ်နီဟာ ဖနောင့်ကြောဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီး ဒီဒဏ်ရာကြောင့် ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲကို လွဲချော်ခဲ့ပါတယ်။
ကိုစီယဲလ်နီ က ” ပြင်သစ်အသင်းအတွက် ကျွန်တော်အရာရာပေးဆပ်ကစားခဲ့တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်အသက် (၃၃)နှစ်ရှိပါပြီ။ ကျွန်တော် ယူရိုပြိုင်ပွဲ(၂)ကြိမ်နဲ့ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲ (၁)ကြိမ်ကစားခဲ့ပါတယ်။ လက်ရှိပြင်သစ်အသင်းမှာ ကောင်းမွန်တဲ့ ကစားသမားမျိုးဆက်နဲ့ ကောင်းမွန်တဲ့ ကစားသမားတွေရှိနေပါတယ်။ ကျွန်တော်ရဲ့ ဒဏ်ရာကြောင့် ကျွန်တော်ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုပြောင်းလဲဖို့က မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ကျွန်တော့်ရဲ့ ပြင်သစ်လက်ရွေးစင်ကစားသမား ဘ၀ကပြီးဆုံးခဲ့ပါပြီ ” လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ကိုစီယဲလ်နီဟာ ပြင်သစ်လက်ရွေးစင်အသင်းမှာ ၂၀၁၁ ခုနှစ်ကစတင်ကစားခဲ့ပြီး ၂၀၁၈ ခုနှစ်အရောက်မှာတော့ အနားယူခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပြင်သစ်လက်ရွေးစင်အသင်းအတွက် ကိုစီယဲလ်နီဟာ (၅၁)ပွဲကစားခဲ့ပြီး (၁)ဂိုးသွင်းယူခဲ့ပါတယ်။
Photo: Stadium Astro , Ghanasoccernet.com
ပွငျသဈလကျရှေးစငျကစားသမား ဘဝကနအေနားယူခဲ့တဲ့ ကိုစီယဲလျနီ Koscielny
အာဆငျနယျအသငျးရဲ့ ပွငျသဈလကျရှေးစငျ ကစားသမား ကိုစီယဲလျနီ Koscielny ဟာ နိုငျငံလကျရှေးစငျကစားသမားဘဝကနေ အနားယူခဲ့ပါပွီ။ ကိုစီယဲလျနီဟာ ပွငျသဈအသငျးရဲ့ ကမ်ဘာ့ဖလားအောငျပှဲမှာ မပါဝငျခဲ့လို့ စိတျမကောငျးဖွဈမိတယျလို့ ပွောကွားခဲ့ပါတယျ။ အာဆငျနယျနဲ့ အကျသလကျတီကိုတို့ ကစားခဲ့တဲ့ ယူရိုပါလိဂျပှဲစဉျပှဲစဉျမှာ ကိုစီယဲလျနီဟာ ဖနောငျ့ကွောဒဏျရာရရှိခဲ့ပွီး ဒီဒဏျရာကွောငျ့ ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲကို လှဲခြျောခဲ့ပါတယျ။
ကိုစီယဲလျနီ က ” ပွငျသဈအသငျးအတှကျ ကြှနျတျောအရာရာပေးဆပျကစားခဲ့တယျလို့ ထငျပါတယျ။ ကြှနျတျောအသကျ (၃၃)နှဈရှိပါပွီ။ ကြှနျတျော ယူရိုပွိုငျပှဲ(၂)ကွိမျနဲ့ ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲ (၁)ကွိမျကစားခဲ့ပါတယျ။ လကျရှိပွငျသဈအသငျးမှာ ကောငျးမှနျတဲ့ ကစားသမားမြိုးဆကျနဲ့ ကောငျးမှနျတဲ့ ကစားသမားတှရှေိနပေါတယျ။ ကြှနျတျောရဲ့ ဒဏျရာကွောငျ့ ကြှနျတျောရဲ့ ဆုံးဖွတျခကျြကိုပွောငျးလဲဖို့က မဖွဈနိုငျပါဘူး။ ကြှနျတေျာ့ရဲ့ ပွငျသဈလကျရှေးစငျကစားသမား ဘဝကပွီးဆုံးခဲ့ပါပွီ ” လို့ပွောကွားခဲ့ပါတယျ။ ကိုစီယဲလျနီဟာ ပွငျသဈလကျရှေးစငျအသငျးမှာ ၂၀၁၁ ခုနှဈကစတငျကစားခဲ့ပွီး ၂၀၁၈ ခုနှဈအရောကျမှာတော့ အနားယူခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျ။ ပွငျသဈလကျရှေးစငျအသငျးအတှကျ ကိုစီယဲလျနီဟာ (၅၁)ပှဲကစားခဲ့ပွီး (၁)ဂိုးသှငျးယူခဲ့ပါတယျ။
အိမ်ကွင်းမှာ ၀က်ဖို့ဒ်အသင်းကို ဂိုးသွင်းလေ့ကျင့်ခဲ့တဲ့ မန်စီးတီး
by Naing Linn . 25 mins ago
Maddison ရဲ့ လှပတဲ့ဂိုးနဲ့ စပါးအသင်းကို အနိုင်ရခဲ့တဲ့ လက်စတာ
by Naing Linn .3hours ago
အနာဂတ်မသေချာဖြစ်နေတဲ့ Zidane နေရာ အစားဝင်ဖို့ ရေပန်းစားနေတဲ့ နည်းပြများ
by Naing Linn .5hours ago
ပြိုင်ဘက်တွေကို ခက်ခက်ခဲခဲ ရင်ဆိုင်ရမယ့် မန်စီးတီးနဲ့ စပါး
by Naing Linn .7hours ago
by Ko Kyue . 8 hours ago
လာလီဂါပွဲစဉ်(၅)မှာ နိုင်ပွဲဆက်ဦးမယ့် ဘာစီလိုနာ